Ixabiso lokuxuba umatshini wexabiso eliphantsi wemfuyo yehashe umgquba wokujika
Imfuyo Umgquba Umgquba Turner
I-TAGRM M2000 izixhobo zomgquba ziyilelwe ukuqhubekeka ukuya kwi-430 yeekyubhiki mitha yomgquba ngeyure ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nobungakanani bokujika. Njengokuthengisa okushushu umatshini wokwenza umquba ngokwakho e-China, i-M2000 inokugcina iindleko zabasebenzi be-150.
Ixesha lokukhokhela: Iintsuku ezingama-30
Ukusebenza Ububanzi: 2000mm
Ubude bokusebenza: 800mm
Ukusebenza komthamo: 430m³ / h
Malunga nokuZala kweMfuyo
Ngophuhliso olukhawulezayo lokuzala okukhulu, isixa esikhulu selindle lemfuyo kunzima ukujongana nalo. Ngokwe-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo e-China, i-China ivelisa phantse i-4 yezigidi zeetoni zenkunkuma yezilwanyana minyaka le.
Zingaphi ii-KGS zomgquba isilwanyana esinokuzenza NGOMSUKU?
Iingcebiso ze TAGRM
I-TAGRMUmatshini Wokuxuba Umgquba unokugqibezela ukujika, ukuvusa, ukuxuba, ukutyumza kunye nokufaka ioksijini izinto ezinje ngemfuyo kunye nomgquba weenkukhu, kwaye inkqubo yokutshiza inokongeza amanzi kunye nokubila kwinto yokwenza umgquba. Namhlanje,I-TAGRM 'Umatshini Wokuguqula Umgquba usetyenziswe ngempumelelo kumazwe angaphezu kwe-100 anjengeRashiya, iBrazil, iEcuador, iMalaysia, iKuwait, iJordani, iArgentina, iIndonesia, njl., kwiiprojekthi zabo zokusebenzisa inkunkuma yemfuyo kunye neenkukhu.
Umzekelo M2000 Ukucoca komhlaba 130mm H2
Rate Amandla 24.05KW, 33PS） Uxinzelelo lomhlaba 0.46Kg / cm²
Ukukala isantya 2200r / min Ububanzi bokusebenza 2000mm W1
Ukusetyenziswa kwepetroli ≤235g / KW · h Ukuphakama kokusebenza 800mm Ubukhulu.
Ibhetri 24V 2 × 12V Imilo yemfumba Unxantathu 45 °
Umthamo wezibaso 40L Phambili isantya L: 0-8m / min H: 0-40m / min
Ukunyathela ivili 2350mm W2 Isantya esingasemva L: 0-8m / min H: 0-40m / min
Isiseko sevili Ubukhulu: 1400mm L1 Ukuguqula irediyasi 2450mm imiz
Ngaphezulu 2600 × 2140 × 2600mm W3 × L2 × H1 Ububanzi roller 580mm Ngemela
Ubunzima 1500kg Ngaphandle kwepetroli Amandla okusebenza 430m³ / h Ubukhulu.
M2000 Umgquba Turner Ngaphandle Cabin
I-M2000 yokuguqula umgquba ngeKhabhathi
Iiseti ezi-2 ze-M2000 zokujika komgquba zingalayishwa kwi-20 HQ. Elona candelo likhulu lomatshini womgquba liya kupakishwa ze, amanye amalungu aya kupakishwa ebhokisini okanye kukhuselwe iplastiki. Ukuba unazo naziphi na iimfuno ezizodwa ukupakisha, siya kupakisha njengoko isicelo sakho.